Fikarohana momba ny firaisana Ny tantaram-piainana taloha tamin'ny talenta taloha, Deja Vu, fiovana ara-jeografika sy foto-pinoana: Fiovana fanodinana indray ny Persiana Islamika iray | Peter Avery - Fikarohana Reincarnation
Fomba fiaina: Fahatsiarovana geografia
mpikaroka: Ian Stevenson, MD
From: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, avy amin'i Ian Stevenson, MD
Tranga momba ny fanambadiana amin'ny vatana vaovao miaraka amin'ny fanovana ny zom-pirenena & fivavahana: Silamo Iraniana ho Kristiana Britanika
Ity tranga ity dia manome ohatra mahatalanjona amin'ny fahatsiarovana ara-jeografika, izay nahitan'i Peter Avery voajanahary ny làlan'ny Isfahan, ary koa ny famolavolana ny Shalimar Burg, anisan'izany ny toerana nisy ny fidirana voalohany. Na dia tsy hita aza ny fiainam-piainan'i Peter taloha, ireo fahatsiarovana ny fiainana taloha ireo, izay voamarina, dia manohana ny maha-marina an'io tranga teraka tao amin'ny vatana vaovao io. Ankoatr'izay dia misy fiovana lehibe eo amin'ny fivavahana sy ny zom-pirenena. Peter Avery dia toa efa Silamo taloha tany Iran. Tamin'ny andro ankehitriny dia teraka tany Angletera izy ary azo inoana fa Kristiana.
Fahatsiarovana geografika amin'ny tranga Reincarnation: endrika iray amin'ny Deja Vu
Ny fahatsiarovana ara-jeografika dia azo raisina ho toy ny endrika déjà vu, izay misy olona mahatsapa fa efa tany amin'ny toerana ara-batana izy ireo taloha, na dia ny olona iray dia raha ny marina dia tsy mba teo amin'io toerana io tamin'ny androm-piainany.
Ny tranga sasantsasany amin'ny déjà vu dia mety noho ny fotoana niainany iray izay nandaniany ny fotoana teo amin'ny faritra ara-jeografika izay nanentana ny fahatsapana déjà vu. Ian Stevenson dia nanasongadina fa ny déjà vu dia tena fahita ary ny fanadihadiana sasany dia mampiseho fa mihoatra ny 60 isan-jaton'ny olona no efa nandia déjà vu. (1)
Ilay manamboninahitra Navy Peter Avery dia manao fiofanana amin'ny fiteny arabo
Ny lohahevitra tamin'ity raharaha ity, Peter Avery, dia teraka tao Derby, Angletera, ny May 15, 1923. Tamin'ny Ady Lehibe Faharoa dia nanompo tao amin'ny Royal Indian Navy izy. Taorian'ny ady, niditra tao amin'ny Oniversite ao Londres izy, ary nahazo diplaoma tamin'ny 1949 ary nahazo mari-pahaizana tamin'ny fiteny arabo sy Persiana.
Miaraka amin'ireto fahaiza-manao ireto dia naka asa i Peter ho mpiandraikitra ny fampiofanana ho an'ny fiteny arabo sy persianina ho an'ny Anglo-Iranian Company Company. Niorina tao amin'ny tanànan'i Abadan any amin'ny faritra atsimo andrefan'i Iran izy. Nandritra ny enim-bolana voalohany nanendrena azy, dia natokana an'i Abadan sy ny sahan'ny manodidina izy.
Tamin'ny ririnin'ny 1949-1950, tompon'andraikitra iray ao amin'ny biraon'ny orinasa London, John John Evans, dia nikasa ny hamonjy toeram-pizahan-tany any Iran ary mila mpandika teny iray handeha aminy izy. Notendrena hikotraka an'i Atoa Evans i Peter amin'ny diany any Isfahan, any afovoany, i Peter.
Nahafaly an'i Peter ny nomena azy, satria hahita an'i Iran izy amin'ny farany. Raha tsiahivina dia tsy mbola tao anaty faritra manodidina an’i Abadan i Peter.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha tao Isfahan
Tao Isfahan, nandritra ny sakafo maraina dia nofaritan'i Peter tamin'i Atoa Evans, tamin'ny an-tsipiriany, ny lalana izay halehany avy amin'ny hotely azy mankany amin'ny tranoben'ny tanàna ary hatrany Maidan-I Shah, kianja iray ampahibemaso izay tafiditra amin'ny tranoben'ny lapa naorin'i Shah Abbas Izaho dia eo anelanelan'ny taona 1590 ka 1595.
Gaga i Andriamatoa Evans fa be dia be ny fahalalana an'i Peter momba ny arabe ao Isfahan, satria mbola tsy tao akory i Peter. Niaiky i Petera fa toa fantany ny fomba voajanahary. I Peter dia tsy nanontany momba ny bokin-tsafidy na sarintany mba hamaritana ny lalana mankany amin'ny kianja sy Maidan-I Shah; hoatran'ny hoe nahalala ny lalana ihany izy.
Rehefa nandeha an-tongotra namakivaky ny tanàna izy ireo, marina ny lalana naroson'i Peter. Mampahatsiahy ny tranga izany ny Anne Frank | Barbro Karlen, toa an'i Barbro, tamin'izy folo taona dia afaka nitarika ny ray aman-dreniny avy tao amin'ny hotely azy tamin'ny lalana 10 minitra iray nandeha namakivaky ny lalan'ny fiaran-dalamben'i Amsterdam mivantana tany amin'ny trano Anne Frank, na dia tsy mbola nandeha tany Amsterdam aza izy taloha. Tahaka izany ihany koa i Peter dia nitarika an'Andriamatoa Evans namakivaky ny araben'i Isfahan mankany amin'ny fitoeram-barotra sy Maidan-I Shah.
Tondra-dranom-piainana taloha tany Madrasa Mader-e Shah
Ny toerana farany izay nalain'i Peter tamin'Andriamatoa Evans tamin'io maraina io dia Madrasa Mader-e Shah, siansa teolojika naorin'i Shah Sultan Hussein tao amin'ny 1706, izay natokan'i Hussein ho an'ny reniny. Moskoa misy domino manga mipetraka ao amin'ny zaridainan'ny kompleks. Vantany vao niditra tao an-tokotanin'ny Madrasa Mader-e Shah i Peter sy Andriamatoa dia nahatsapa fihetseham-po i Peter. Aoka h avelantsika hitantara ny fiovan'ny zava-niseho i Peter:
“Nigogogogo nitomany mafy aho tamin'ny fahatsapana fa niverina tany an-trano aho. Nipetraka teo ambonin'ny arofanin'ny dobo iray aho. Nandeha tamim-pahendrena tokoa Andriamatoa Evans. Nilaza izy taorian'izay fa ity no toa tsara indrindra azony natao, mandra-pahamaiko ny masoko sy nihaonako taminy indray. Tsy dia nandalo anay ny momba ilay fizarana izay, teo imason'ny mpampiasa ahy, nahamenatra ahy, na dia tsy naneho famantarana tsy fankasitrahana aza izy ary toa nahatakatra mangingina. Nifarana tamin'izay ny maraina iray izay tsapako fa efa nahazatra tamina tanàna tsy mbola notsidihiko taloha aho, ary ny jeografia izay tsy mbola fantatro taloha. " (2)
Ity onjam-pientanam-po ity dia mitovy amin'ny tranga niseho tamin'ny John B. Gordon Jeff Keene, rehefa nitarika tamim-pitiavana tany amin'ny toerana antsoina hoe Sunken Road i Jeff, izay fizarana ady an'habakabaka Amerikana antsoina hoe Antietam. Tao amin'ny lalana Sunken, tsy nahalala ny antony dia nanomboka nitomany tsy nahatsiaro tena koa i Jeff. Malahelo izy ary tezitra mafy tamin'izany. Taty aoriana dia nahalala izy fa saika maty tamin'ny ady an-trano tao amin'io toerana io indrindra tao amin'ny Sunken Road, tamin'ny fotoan'androny lasa John B. Gordon.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: Fahalalana tsy azo fantarina momba ny maritrano manokana Shalimar Bagh
Peter dia manana traikefa hafa iray izay toa niainga tamin'ny fotoam-piainany taloha na niainana tany Iran sy India. Tao 1944, tao amin'ny Royal Indian Navy izy nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Peter dia 21 taona tamin'io fotoana io. Ny manamboninahitra indianina iray teo amin'ny sambony dia nanambady azy ary nanasa an'i Peter hitsidika ny fianakaviany, izay nipetraka tao Lahore, izay efa tafiditra ao Pakistan ankehitriny.
Fantatry ny sakaiza fa tena nahaliana an'i Peter ny literatiora sy ny kolontsaina islamika ary tiany hihaona amin'i rainy, Khan Bahadur Muhammad Shafi, izay foto-pianarana iray ho an'ny fianaran-jery sy ny manam-pahaizana amin'ny tantara silamo i Peter Bahadur Muhammad Shafi.
Tao Lahore, izy ireo dia nitsidika ny Shalimar Bagh, tranobe zaridaina izay namboarin'ireo emperora Mughal Islamika. Niaraka tamin'ny rain'ny sakaizany, Bahadur Muhammad Shafi, manam-pahaizana i Peter. Tsy tao amin'ny Shalimar Bagh mihitsy i Peter hatrizay, ary tsy namaky ny fandaharana nataony.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: Peter no namantatra ny varavarana voalohany tany Shalimar Bagh
Petera sy Andriamatoa Shafi dia niditra tao amin'i Shalimar Bagh namakivaky varavarana teo amin'ny rindrina manodidina. Fantatr'i Peter fa tsy io no fidirana voalohany. Nilaza tamin'i Shafi izy fa ny vavahady tany am-boalohany dia eo amin'ny rindrina manohitra azy ireo, amin'ny lafiny ilan'ny valopy. Nilaza tamin'i Peter i Atoa Shafi fa marina tokoa izy.
Taty aoriana dia naneho hevitra i Peter fa ny tranobe, na trano kely, any afovoan-jaridaina, dia tsy ampahany amin'ny famoronana tany am-boalohany. Nanamafy ny tenin'i Peter ihany koa Atoa Shafi, ary nanamarika fa tany am-pon'ny fasan'ny amperora ny pavillon ary nifindra tany Shalimar Burg nataon'i Ranjit Singh, Sikh izay nifehy an'i Lahore nanomboka tamin'ny 1799 ka 1839.
Tahaka izany, ny tolotrasan'i Peter tamin'ny androm-piainany taloha, izay nahalalany an'i Shalimar Burg, dia tsy maintsy nitranga talohan'ny 1799, talohan'ny nifindran'ny trano heva avy tao amin'ny fasana mankany Shalimar Burg.
Reincarnation & Déjà vu Experience any Shalimar Bagh, Lahore
Nanoratra ny zavatra niainany tao amin'ny Shalimar Burg i Peter:
“Na dia tsy nihetsiketsika loatra aza aho raha tsy tao Isfahan, amin'ny fahatsapako ny déjà vu, ao amin'ny Shalimar Bagh any Lahore, dia tena nanana fahatsapana toy izany aho taloha: ny hahafantarako tsara ilay toerana; ny fiverenany, toy ny hoe any an-trano, any amin'ny toerana izay efa niorenako taloha 'tao an-trano', fa ny fahatsapana an'izany tao amin'ny Madrasseh any Isfahan dia vao mainka nihetsika izany tao Lahore, izay nametrahana azy tao amin'ny zaridaina ary tsy niitatra tamin'ny tontolo tontolo. ”(3)
Ny zavatra niainan'i Peter tao Shalimar Burg dia mampatsiahy ny zava-nitranga tao amin'ny Anne Frank | Barbro Karlen reincarnation raharaha. Tsarovy fa i Barbro dia nitarika ny ray aman-dreniny ho any an-trano Anne Frank tao Amsterdam, tamin'izy folo taona, na dia mbola tsy tany Amsterdam mihitsy aza izy. Rehefa nanakaiky ny trano Frank, dia nanamarika i Barbro fa niova ny fidirana, izay marina. Fantany ihany koa fa ny sary izay nakan'i Anne Frank avy tao amin'ireo magazine ny kintana amin'ny sarimihetsika dia tokony teo amin'ny rindrina manokana. Ireo sary ireto dia nalaina nalaina avy teo mba hapetraka taorinan'ny fitaratra fiarovana, ka tsy teo izy ireo raha nitsidika ny trano Frank i Barbro sy ny ray aman-dreniny. Ny mpiandraikitra ny fizahantany kosa dia nanamafy fa marina i Barbro momba ny toerana misy ny sary matetika.
Tahaka ny nahafantaran'i Barbro ny antsipirihany momba ny firafitra sy ny anatiny ao an-trano Anne Frank tamin'ny nahitana azy taloha, dia toa i Peter nahalala ny famoronana an'i Shalimar Burg, toa avy tamin'ny fotoam-piainany taloha na niainany tao Iran sy Pakistan.
Fialam-piainana taloha: Lasa Mpampianatra Cambridge i Peter Studians amin'ny Persian
Nanomboka tamin'ny 1958 ka hatramin'ny 1990, dia mpampianatra tamin'ny Oniversite ho an'ny Studies Persian tao amin'ny Cambridge University i Peter. Taorian'izay dia notohizany amin'ny maha-Mpianatry ny King's College, any Cambridge, izay nananganana azy ho manam-pahaizana malaza amin'ny fianarana Persiana. I Peter dia fanta-daza indrindra amin'ny fandikana ny poeta Persiana Hafiz sy Omar Khayyam. Ankoatr'izay, nanoratra betsaka momba ny tantaran'ny Iran izy, hatrany am-boalohany hatramin'ny voalohany.
Avy taiza ny fitiavan'i Peter ny Persiana sy ny fampianarana Islamika, satria teraka tany Angletera izy, izay firenena lehibe indrindra?
Hita fa ny fitiavany ny Persiana, Iran ary ny fianarana Islamika dia avy amin'ny fiainam-piainana taloha na ela niainana tao Iran sy Pakistan, ka nampahafantatra ny fahalalany amin'ny famoronana an'i Shalimar Burg, any Lahore, Pakistan, ny fahalalany amin'ny lalan'ny Isfahan. tany Iran, ary koa ny fihenan'ny fihetseham-po niainany tany Madrasa Mader-e Shah, tany Isfahan, Iran.
Maty i Peter Avery tamin'ny Oktobra 6, 2008 tany Angletera.
Tsy tadidin'i Peter Avery izay anarana avy amin'ny fanandramana niainany taloha tany Iran sy Pakistan ary noho izany, tsy nahafantatra azy izy hoe iza no izy taloha. Raha ny zava-misy dia tsy azo nohamarinina ara-tantara ity tranga ity. Na izany aza, ny zavatra niainany déjà vu sy ny fahalalany momba ny toerana ara-jeografika izay tsy mba notsidihiny taloha tao amin'ny fipetrahany ankehitriny dia mifanaraka amin'ny fahatsiarovana ny fiainany taloha.
Mampiseho ireto endri-javatra manaraka ireto izy:
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: Nanana fahalalana tamin'ny antsipirihany momba ny arabe ao Isfahan, Iran i Peter ary nahalala ny famoronana tany am-boalohany an'i Shalimar Burg, any Lahore, Pakistan (sary eo ankavanana), na dia mbola tsy nankany amin'ireo toerana ireo tamin'ny androm-piainany ankehitriny izany. Nilaza koa i Peter fa tsy nahazo izany fanazavana izany tamin'ny alàlan'ny sarintany na boky.
Ankoatr'izay, niaina tondradrano fihetseham-po Madrasa Mader-e Shah, izay hita ao Isfahan, Iran (sary etsy ambany ary miankavanana), ao anatin'izany ny fahatsapana fa feno fahatsapana fa nody izy.
Azo inoana fa ireo zavatra niainana ireo dia niainga tamin'ny fiainana taloha na tamin'ny androm-piainany taloha izay nandaniany fotoana tany amin'ireo toerana jeografika ireo tany Iran sy Pakistan. Ny elanelana misy eo anelanelan'ny tanàna niainany fahatsiarovana ara-jeografika, teo anelanelan'ny Isfahan sy Lahore, dia sahabo ho 1000 kilometatra na 1600 kilometatra. Miorina amin'ny famindrana ny tranoheva tany Shalimar Burg, ny andro taloha niainan'i Peter, rehefa nitsidika an'io zaridaina io izy dia tsy maintsy talohan'ny 1799.
Tsy fantatra mazava raha mahazatra ny dia anelanelan'ny Isfahan sy Lahore tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo. Raha izany no izy, dia ny zavatra niainan'i Peter dia mety hitranga tamin'ny fahatongavany ho nofo taloha. Raha tsy nisy ny fitsangatsanganana tamin'ireo tanàna ireo tamin'izany vanim-potoana izany, dia azo inoana fa nanana nofo in-droa i Peter, iray andro any amin'ny faritry Isfahan, Iran, ary iray hafa any amin'ny faritr'i Lahore, Pakistan.
Ny fahalianana taloha sy talenta taloha: Nahay mahay teny persianina i Peter ary lasa manam-pahaizana ekena eran'izao tontolo izao amin'ny fandalinana Persiana sy Islamika. Mety ho ny talentany amin'ny fiteny Persiana sy ny fitiavany ny literatiora sy ny tantara silamo sy ny finoana silamo dia niforona hatramin'ny ela niainana na fianana silamo tao Iran.
Reincarnation & Fanovana ny zom-pirenena sy ny fivavahana: Na dia tsy voafaritra manokana ao amin'ny tatitra momba an'i Ian Stevenson aza ny fivavahan'i Peter Avery, dia azo inoana fa natsangana tamin'ny fianakaviana kristiana i Peter, nomena ny anarany sy ny fahaterahany tany Angletera, firenena kristiana be vava.
Raha nanana fiainana niaina sy niaina tany Iran sy Pakistan i Peter, ary raha ny fitiavany ny kolontsaina Islamika dia avy amin'ny fahatongavan'ny Silamo taloha, dia ity tranga ity dia mampiseho fiovana lehibe eo amin'ny firenena sy ny fivavahana hatramin'ny iray androm-piainany.
Rehefa mandinika hetsika toy ny fandringanana ny World Trade Center any New York sy ny fifanolanana misy eo amin'ny Taliban, Al-Qaeda sy ny kolotsaina Judeo-Christian, ity tranga ity dia afaka mampianatra lesona sarobidy amintsika.
Ity tranga famerenan-tsaina ity dia mampiseho fa afaka Silamo amin'ny androm-piainany iray isika ary kristiana amin'ny iray hafa, ary koa Iraniana na Pakistaney amin'ny nofo iray ary Anglisy amin'ny fiainana taty aoriana. Ireo fahatanterahany ireo dia tokony hahatonga antsika hahita ny tenantsika ho fanahy manerantany izay tsy voafetra ho amin'ny fivavahana iray na firenena iray. Ny fanatanterahana izany dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa.
Fanamarihana hoan'ny mpamaky: Ian Stevenson. MD dia Profesoran'ny Psychiatrie ao amin'ny Oniversiten'i Virginia izay nanoratra tamina karazana akademika tena izy, satria mpahay siansa ny mpihaino azy. Ao amin'ny tranokalan'ny vohikala vaovao momba ny Reincarnation, ny tranga momba ny fiainany taloha dia aseho amin'ny ny tantaram-pianakaviana fahiny-tantara momba ny fanambadiana mba hanamora ny fahatakarany ny asany akademika. Ho an'ireo izay liana amin'ny fankasitrahana ny fikarohana ara-tsiansa, toy ny fampiasany vavolombelona marobe mba hametrahana fijoroana vavolombelona voamarina, azafady, azafady ny tatitra voalazan'ny Dr. Ian Stevenson.
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 231
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 234
3. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 234